Daryeelka Bishimaha Iyo Cadeynta Ilkaha - Daryeel Magazine
Daryeelka Bishimaha Iyo Cadeynta Ilkaha
Bishimo qalleelku waa dhibaato guud oo noqon karta mid xanuun badan oo aan qurux badanayn. Waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah vitamins-ka oo yaraada, fuuqbaxa, bishamaha oo aad loo leefo, qoraxda saaid ka ah iyo qabowga badan.
Muuqaalkaan hoose waa qeyb ka mid ah barnaamijka Cooking With Hafza waxaana uu ku saabsan yahay daryeelka bishimaha. Hafza ayaa kula la wadaagaysa waxyaabo raqiis ah oo aad gurigaaga ku samaysan karto isla markaana u fiican bishimaha.
Alaabtaan ayaa kooban labo qeybood, nooca koobaaad waxaa loogu talogalay bishamaha qolofta leh.
Waxaa laga samaynayaa
Saliida lowska (almond oil)
Nooca labaad waa mid la markasta la marsana karo bishimaha.
waxaa laga samaynayaa:
Caleenta shaaha cagaaran
Saliida geedka udgoon ee loo yaqaan “Peppermint”
Ka faaidayso sida fudud ee loo samaynayo:
Caalamadaha Soo Bixidda Ilkaha Caruurta Iyo Daryeelka Ay U Baahan Yihiin Noocyo Cuntooyinka Ka Mid Ah Oo Ilkaha U Keeni Kara Midabka Jaallaha Macmacaan Laga Samaynayo Karooto Iyo Baradho Sida Ilkaha Loogu Caddeeyo Dhuxusha